Tsy mitoky amin'ny fisainan'ny tena
“Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin’ny teny fahendrena mahataona, fa tamin’ny fanehoan’ny Fanahy sy hery” 1 Kôr. 2:4
Nahita aho fa misy loza manimba ny dingana vaovao rehetra mikasika ny fanandramana ao amin’ny fiangonana, satria misy olona sasany mihaino amin’ny toetsaina tena tsy izy. Na dia matanjaka sy mahomby amin’ny fampianarana ireo foto-pinoana ao amin’ny Baiboly aza ny mpampianatra sasantsasany, dia tsy ho olona manana fahalalana momba ny fiainana azo ampiharina sy afaka manoro hevitra amin’ny fomba azo antoka sy tsy atahorana ireo saina feno fanahiana tsy akory izy ireo. Tsy mahatakatra ny toe-javatra sarotra izay tsy maintsy holalovan’ny fianakaviana rehetra miroso amin’ny fiovana izy ireo. Koa aoka hitandrina amin’ny lazain’izy ireo; raha tsy mahalala ny sain’Andriamanitra amin’ny zavatra sasantsasany izy ireo, dia aoka izy ireo tsy hiteny avy amin’ny vinavina na petra-kevitra. Raha tsy mahalala zavatra azo antoka izy ireo, dia aoka hiaiky izany izy ireo, ary aoka hiankina manontolo amin’Andriamanitra ny tsirairay. Aoka hisy vavaka hatao, na amin’ny fifadian-kanina mihitsy aza, mba tsy hisy na iray aza latsaka ao anatin’ny fahamaizinana, fa handroso amin’ny fahazavana tahaka an’Andriamanitra ao amin’ny mazava.
Mety hanam-po zavatra manimba ny ivelany sy ny ao anatin’ny laharantsika isika; ary misy saina maro tsy manaiky fehezin’ny fahasoavan’ny Fanahy Masina, izay tsy nampihatra ny tenin’i Kristy sy tsy mahafantatra ny fiasan’ny Fanahin’Andriamanitra ary hanaraka lalan-diso satria tsy manaradia an’i Kristy tanteraka izy ireo. Miantehitra amin’ny fientanam-po sy fisainan’ny tenany izy ireo.
Aoka tsy hisy zavatra atao amin’ny fomba misavoritaka, ka hisy fatiantoka na fahavoazana goavana eo amin’ny fananana, vokatry ny lahateny mafana sy mirehidrehitra manaitra ny fientanentanana izay tsy avy amin’ny baikon’Andriamanitra, ka ny fandresena tena ilaina ho azo dia mety hivadika faharesena noho ny tsy fisian’ny fahaizana mandanjalanja sy fandinihina lalina tsara, ary fitsipika sy fikasana madio. Aoka hisy hakingana feno fahendrena amin’io resaka io, ary aoka ny rehetra handroso eo ambany fitarihan’ny Mpananatra tsy hita maso, dia Andriamanitra izany. Zavatra maro no itoloman’ny olona mba hahazo fandresena , ary mety hisy asa natao tsy misy dian-tanan’Andriamanitra. STVMBC,tt.17,18.